Zencastr: သင်၏ Podcast အင်တာဗျူးများကိုအလွယ်တကူမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည် Martech Zone
အသံလွှင့်ရုံတင်သည့်အရာ၏သူငယ်ချင်းနှင့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာမာစတာမှာ Jen Edds ဖြစ်သည် Brassy အသံလွှင့်ကုမ္ပဏီ။ သူမကိုမကြာခဏမတွေ့ရတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်တဲ့အခါသူကအမြဲတမ်းရယ်မောစရာတွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်။ Jen သည်ထူးချွန်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ရယ်စရာ၊ သူသည်အရည်အချင်းရှိသောဂီတပညာရှင်နှင့်အဆိုတော်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ငါသိသောအတွေ့အကြုံအရှိဆုံး podcasters များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော့်ကိုကိရိယာအသစ်တစ်ခုဝေငှတဲ့အခါမှာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Zencastr.
သင်ကဝါရင့် podcaster တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းမှာမင်းမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုရှိတယ် ရောနှောဘုတ်အဖွဲ့ နှင့်မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်နားကြပ်များစွာသောအစုံ။ သင်က podcaster အသစ်တစ်ခုဖြစ်လျှင်သင်၌aရှိနိုင်သည် ဒီဂျစ်တယ်ရောနှောစက်။ သင်ဝေးလံသော guests ည့်သည်များကိုဆောင်ကြဉ်းချင်သည့်အခါရှုပ်ထွေးစတင်သည်။ ငါတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေ Indianapolis Podcast တခုကိုစတူဒီယို Skype သို့မဟုတ်အခြားအသံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရောနှော။ ထုတ်ရန် Mac Mini နှင့် USB audio interface နှစ်ခုရှိသည်။
ဒါကနည်းပညာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာ၊ သင်ဟာသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဆီကိုဘတ်စ်ကားစီးဖို့ In-studio ရှေးရှေးတွေကိုထုတ်ပေးဖို့သင့်ရဲ့ရောနှောခြင်းကိုကြိုးနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောနှောဖို့ပရိုဂရမ်လုပ်ရပါမယ်။ နောက်ပြီးသင့် guest ည့်သည်ရဲ့အသံကိုပြန်မချမိအောင်သေချာအောင်လုပ်ရမယ်၊ သင့်အွန်လိုင်း guests ည့်သည်များကပဲ့တင်သံကိုကြားရလိမ့်မည်။ သင်၏ပြthoseနာများသာမကဘဲ Skype ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးပရိုဂရမ်များသည်အသံနှင့်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံတစ်ခုသို့ဖုန်းခေါ်နေသူတစ် ဦး ကိုကြားနေသည့်အလားဖြစ်သည်။
ဒါတွေအားလုံးကိုသင်ရခဲ့ပြီလား ဟုတ်တယ်…တစ်ခါတလေအရမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ် ငါဒေသခံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် အသံအင်ဂျင်နီယာဘရတ် Shoemaker နှင့် Behringer အင်ဂျင်နီယာများအားလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်ကျနော်တို့ပိုကောင်းအွန်လိုင်းမှတ်တမ်းတင်များအတွက်အသံပလက်ဖောင်းတစည်းနှင့်အတူစမ်းသပ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်ကတည်းကဒီမဆိုမလိုအပ်ပါ Zencastr ဒီမှာ! အခြားအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများဖြစ်သော BlogTalkRadio (ကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းအသံအရည်အသွေးကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာသွားသည်) ကဲ့သို့ Zencastr ကထောက်ပံ့သည် အရည်အသွေးမြင့်မှတ်တမ်းတင် နေရာဒေသအမျိုးမျိုးမှ guests ည့်သည်များစွာပါ ၀ င်နိုင်သော Podcast တစ်ခုအတွက်တည်ဆောက်ထားသည်။
Guest ည့်သည်တစ်ယောက်အတွက်သီးခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခု - Zencastr သည်အသံတစ်ခုချင်းစီကိုဒေသအလိုက်အရည်အသွေးဖြင့်မှတ်တမ်းတင်သည်။ မကောင်းသောဆက်သွယ်မှုကြောင့်ထပ်မံထွက်မထွက်တော့ပါ။ ပြပွဲကာလအတွင်းအရည်အသွေးပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ပါ။ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံပေမယ့်ဘာမျှမ။
Lossless WAV တွင်မှတ်တမ်းတင်ပါ - အရည်အသွေးအပေါ်အပေးအယူမထားပါနဲ့။ Zencastr သည်သင်၏ guests ည့်သည်များကိုအရှုံးမရှိသည့် 16-bit 44.1k WAV တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့်သင်နှင့်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အသံကိုရရှိသည်။
တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်မှုအတွက်အသံဘုတ် - သင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်မိတ်ဆက်၊ ကြော်ငြာသို့မဟုတ်အခြားအသံများကိုတိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။ ဤသည်ကသင့်အား postproduction ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းပြင်ဆင်ရန်အချိန်ယူရသည်။
Built-in VoIP (Voice over IP) - Skype သို့မဟုတ် Hangouts ကဲ့သို့သော third-party ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ Zencastr မှတစ်ဆင့်သင်၏ voice ည့်သည်များနှင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်သည်။
အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း - သင်၏အသံသွင်းခြင်းကိုထုတ်ဝေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော professional mix တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အတွက်အသုံးပြုထားသော curated audio enhancements နှင့်ရောနှောထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းထုတ်လုပ်ပါ။
Cloud Drive ပေါင်းစည်းမှု - လွယ်ကူသောတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဝေမျှခြင်းအတွက်သင်၏အသံသွင်းချက်များကိုသင်၏ Dropbox အကောင့်သို့အလိုအလျောက်ပေးပို့သည်။ Google Drive မကြာမီလာမည်
ဟေ့ ... ခင်ဗျားစတာကိုစလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျင်ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့သင်တန်းကိုတက်လိုက်ပြီ သင်၏ကိုယ်ပိုင် Podcast တခုကိုစတင်ခြင်း အဲဒါမဖြစ်မနေပဲ!
Brassy Broad ၏ကြေးဝါသည် Pod-Class ကို ဦး တည်သည်